सर्लाहीको कुन स्थानीय तहमा कुन दलको अग्रता? « Sansar News
सर्लाहीको कुन स्थानीय तहमा कुन दलको अग्रता?
४ आश्विन २०७४, बुधबार १२:३३
४ असोज, सर्लाही । सर्लाहीका २० स्थानीय तहहरुमा मतगणना क्रम जारी छ । अहिलेसम्मको परिणामअनुसार नेपाली कांग्रेस ५, माओवादी केन्द्र ४, राजपा ५,नेकपा एमाले ३, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल २, र लोकतान्त्रिक फोरमले १ स्थानमा अग्रता लिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले मलंगवा नगरपालिका, धकौल गाउँपालिका रामनगर गाउँपालिका चक्रघटा गाउँपालिका र हरिपुर्वा नगरपालिकामा अग्रता लिएको छ ।
त्यसैगरी राजपा नेपालले बलरा नगरपालिका, गोडैता नगरपालिका, कौडेना गाउँपालिका, ब्रह्मपुरी गाउँपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिकामा अग्रता लिएको छ । एमालेले हरिवन नगरपालिका, लालवन्दी नगरपालिका र इश्वरपुर नगरपालिकामा अग्रता लिएको छ ।
त्यसैगरी माओवादी केन्द्रले बागमती नगरपलिका हरिपुर नगरपलिका बरहथवा नगरपालिका बसवरिया गाउँपालिकामा अग्रता लिएको छ । त्यसैगरी कबिलासी नगरपालिका, र पर्सा गाउँपालिकामा संघीय समाजवादी फोरम नेपालले अग्रता लिएको छ । बिष्णु गाउँपालिकामा भने लोकतान्त्रिक फोरमले अग्रता लिएको छ ।